Myanmar needs to bring in whole ecosystem instead ofafactory: Serge Pun | Myanmar Business Today
HomeBusinessMyanmar needs to bring in whole ecosystem instead ofafactory: Serge...
“In order to sustain employment we have to get over this mindset that being able to bringafactory into the country is the end objective. No, that’s justastart,” Mr. Serge Pun @ U Theim Wai, Executive Chairman of Yoma Strategic, said duringawebinar organized by UMFCCI.
“You must be able to think one, two, three million employment notafew hundred thousand. To do that, you need to haveastrategy that brings the whole ecosystem. That requires more than justafew slogans. More than just having water and electricity. More than just saying we have cheap labor. It requiresapolicy directive that will directly govern the whole movement to something that is sustainable,” he pointed out and exemplified the success stories seen in neighboring countries.
အတွေးအခေါ် တချို့ကိုပြင်ဆင်နိုင်မှ အလုပ်လက်မဲ့ပြသနာ ကိုဖြေရှင်း နိုင်မည်ဟု YOMA Group ၏ Chairman Mr.Serge Pun @ ဦးသိမ်းဝေ ကထောက်ပြပြောဆိုလိုက်သည်။
“လူတွေကိုဆင်း ရဲနွမ်းပါးမှု ကယ်ဖို့ကိုမေ့လို့မရဘူးဆိုတာသိခဲ့ပါပြီ။ အခက်အခဲတွေကြုံပြီးတဲ့နောက် အတွေးအခေါ်တွေပြောင်း လဲဖို့လိုတာကိုသိလာပါတယ် ဘယ်လို့ပုံစံမျိုးနဲ့ ဆက်သွားနိုင် မလဲမျှော်လင့်တယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ အလုပ်လက်မဲ့ပြသနာကဆက်ရှိနေတယ်။ ကျွန်တော် ထင်မြင်တဲ့ ဒီမှာလက်ခံထားတဲ့ အတွေးအခေါ်အယူအဆက ဒီနိုင်ငံထဲကို စက်ရုံတစ်ခုရောက်ဖို့ ကအဆုံးသတ်ရည်ရွယ်ချက် ဆိုတဲ့အတွေးအခေါ်မျိုးကို ပြင်ရပါမယ် ဒါဟာအစပဲရှိပါသေးတယ် ပြောရရင် စက်ရုံတစ်ခု သယ်လာနိုင်ရင်ဒါဟာအစပါပဲ “ ဟု Mr.Serge Pun ကဆိုသည်။
စီးပွားရေးစနစ် တစ်ခုလုံးကို သယ်ဆောင်လာနိုင်မှသာ သန်းနှင့်ချီသော အလုပ်အကိုင်များဖန်တီးပေးနိုင်မည် ဖြစ်ပြီး ရေ မီး အပါအဝင် စျေးပေါသော လုပ်အားများရှိသည် ဆိုရုံဖြင့် မရဘဲ ရေရှည်ထိန်းသိမ်းနိုင်မည့် တိကျသောမူဝါဒရှိရန် လို အပ်ကြောင်းလည်း ၄င်းကဆိုသည်။
“စီးပွားရေးစနစ် တစ်ခုလုံးကို သယ်ဆောင်နိုင်ဖို့ဆိုရင် နည်းဗျူဟာ လိုပါတယ်။ အဲ့ဒီအတွက်ဆောင်ပုဒ် အနည်းငယ်ရှိ ရုံနဲ့မရပါဘူး။ ရေ မီး ပြီးတော့ ငါတို့မှာစျေးပေါတဲ့ လုပ်အားရှိတယ် ဆိုရုံနဲ့ မရပါဘူး။ ဒီလှုပ်ရှားမှု တစ်ခုလုံးကို ရေရှည်ထိန်းသိမ်းနိုင်မယ့် တိကျတဲ့မူဝါဒ လိုအပ်ပါတယ်။ ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က ဘာမှတီထွင်နေတာမဟုတ်သလို ထက်မြက်သလို ပုံဖမ်းနေတာလည်းမဟုတ်ပါဘူး။ ကျွန်တော်တို့ ဘေးပတ်ဝန်းကျင်နိုင်ငံတွေမှာ ရှိနေတဲ့ အောင်မြင်ခဲ့တဲ့ ဇတ်လမ်းတွေကို ဥပမာထားကြ ရပါမယ်။ ဒါတွေကိုအသုံးချရပါမယ် “ ဟု Mr.Serge Pun ကပြောသည်။
၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာနှစ်တွင် မြန်မာ့စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုသည် ၆ ဒသမ ၈ ရာခိုင်နှုန်းရှိခဲ့ရာမှ လက်ရှိ ၂၀၁၉ -၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာနှစ်တွင် သုည ဒသမ ၅ ရာ ခိုင်နှုန်းသို့ ကျဆင်းသွားနိုင်သည့်အပြင် ထပ်မံကျဆင်းသွားနိုင်သည့် အန္တရာယ်စိန် ခေါ်မှုများရှိကြောင်းကမ္ဘာ့ဘဏ်က ဇွန် ၂၅ ရက်နေ့ထုတ်ပြန်ချက်တွင် ဖော်ပြထားသည်။
၂၀၀၅ ခုနှစ်မှ ၂၀၁၇ ခုနှစ်အတွင်း မြန်မာနိုင်ငံ၏ ဆင်ရဲနွမ်းပါးမှုနှုန်းသည် ၄၈ ရာခိုင်နှုန်းရှိခဲ့ရာမှ ၂၅ ရာခိုင်နှုန်းအထိ ထက်ဝက်နီးပါး ကျဆင်းခဲ့ကြောင်း လည်းဖော်ပြထားသည်။
Previous articleMyanmar Consumers Are into Contactless Payment: Visa Survey
Next articleMyanmar to Fly 13 Relief Flights to Bring Back 1,800 Citizens until August